Mpanamboatra sy mpamatsy lovia telo-lovia China Gripper | Yolanda
Ny takelaka vy natsipy farany dia nopetahany takelaka mavesatra mavesatra, mavesatra fofona ambany misy marika mena mena.
Ny famonoana fingotra avo lenta dia manakana ny fahasimban'ny fitaovana / ny gorodona ary mampihena be ny tabataba.
Mora ny mamoaka sy mamoaka, mitana kofehy telo, mora entina, manavesatra ary mamoaka, ny ivon-kavoana mivadika dia mampihena ny loza ateraky ny rantsantanana rehefa voafintina ilay torolàlana.
Ny fampidirana vy tsy misy fangarony dia mamela ny lanjany hikorisa mora foana miakatra sy midina nefa tsy manimba ny tsorakazo.
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny tsorakazo barbell na azo ampiasaina irery. Tena mety amin'ny fitazonana ny endrika amin'ny vatana, fanamafisana ny hozatra ary ny sokitra.
Ny tabila fampiakarana lanja dia azo ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena hozatra sy fiaretana fiaretana ary hampitombo ny fahafaha-mandanjalanja sy fifandanjana. Ny takelaka iray lanja tokana ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny fanafanafana fanafana.
* Fanatanjahan-tena sy fampiasana an-trano: tombony betsaka ny fampiakarana lanja. Izy io dia afaka manampy anao hanana hery sy hozatra. Arakaraka ny ahatongavanao matanjaka dia mihabe ny hozatrao
Marika: Yolanda Fitness / vilia Karazana: Takelaka telo gripper telo / vilia Ampiasao: Multipurpose / vilia Lanja: 2.5 / 5/10/1/5/20 / 25KG / Fanokafana vozon'akanjo: 50.6MG
Ny famaranana koa dia manampy amin'ny fampihenana ny tabataba misy fiantraikany amin'ny fampihetsiketsehana milamina kokoa sy tsy manelingelina ao amin'ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena any an-tranonao. Tonga lafatra amin'ny fiofanana hozatra sy fifandanjana. Famoronana bika aman-tànana 3 lavaka, tsy misosasosy, mitafy fihetseham-po mahatohitra sy tsara. Taratasy barlety mifono kalitao avo lenta, izy io dia ara-tontolo iainana, madio ara-pahasalamana. Ao anatin'ny fizotran'ny vy mafy dia mafy sy maharitra ny fanaovana fanatanjahan-tena sy ny fampiasana an-trano: mitondra tombony maro ny fampiakarana lanja. Izy io dia afaka manampy anao hanana hery sy hozatra. Arakaraka ny maha-matanjaka anao no maha-betsaka ny hozatrao vita avy amin'ny vy vy matevina ary hosodokoina loko mainty mba hisorohana ny fikapohana sy ny fikororohana.
* Ny takelaka mampiakatra lanja dia azo ampiasaina amin'ny fiofanana hozatra sy fiaretana fiaretana ary hampitombo ny fahafaha-mandanjalanja sy fifandanjana. Ny takelaka iray lanja tokana ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny fanafanafana fanafana. Ho an'ny fanazaran-tena isan-karazany: mampitombo ny fanoherana ny squats, ny fampiakarana lanja dia mety indrindra amin'ny bisikileta, trisep, valahana, hozatry ny tongotra, soroka, lamosina
Teo aloha: Jump Rope Skipping Rope ho an'ny fampiofanana
Manaraka: Dumbbell 24KG azo ovaina
Tarika booty fanoherana tsy elastika
Non slip slip yoga block
Fizarana 8 azo ovaina azo ovaina